सेफडिनिर बनाम अमोक्सिसिलिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण प्रेस कम्पनी, समाचार समुदाय समाचार, कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> सेफडिनिर बनाम अमोक्सिसिलिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
सेफडिनिर (ओम्निसेफ) र एमोक्सिसिलिन (अमोक्सिल) दुई जीवाणु संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक हो। दुबै औषधिहरू एन्टिबायोटिक समूहको एक हिस्सा हो जसलाई बीटा ल्याक्टम्स भनिन्छ। तिनीहरूले विभिन्न प्रकारको संक्रमणहरूको उपचार गर्न सक्छन् जस्तै श्वास नलिका संक्रमण, कानको संक्रमण, र छाला संक्रमण।
धेरै जसो बीटा-लैक्टम एन्टिबायोटिकहरू जस्तै सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिनले यसको ब्याटेरियन्सको क्षमता धान्नको लागि रोक्ने काम गर्दछ। सेल भित्ता । यस प्रक्रियालाई हमला गरेर यी एन्टिबायोटिकहरूले ब्याक्टेरियाहरूको प्राथमिक रक्षा र प्रजनन माध्यमहरू तोड्न सक्षम हुन्छन्।
जे होस् ती समान तरीकाले कार्य गर्दछ, सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन बिटा-लैक्टम एन्टिबायोटिकको बिभिन्न उप-वर्गहरूका भाग हुन्। तिनीहरू कसरी प्रयोग हुन्छन् र कुन ब्याक्टेरियाको बिरूद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि फरक फरक हुन्छन्।
सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
सेफडिनिर एक एन्टिबायोटिक हो जुन अर्को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ सेफलोस्पोरिन । अधिक विशेष रूपमा, यो तेस्रो-पुस्ताको सेफलोस्पोरिन हो जसले ग्राम-पॉजिटभ र ग्राम-नकारात्मक ब्याक्टेरियाहरूको विभिन्न प्रकारलाई समेट्छ। पहिलेको सेफलोस्पोरिन एन्टिबायोटिकको तुलनामा (जस्तै, सेफलेक्सिन, सेफुरोक्साइम, र सेफेक्लोर), सेफडिनिरसँग ग्राम नकारात्मक ब्याक्टेरियाहरूका लागि फराकिलो कभरेज छ।
सेफडिनिर (सेफडिनिर भनेको के हो?) ले समुदाय-अधिग्रहित निमोनिया, तीव्र ओटिटिस मिडिया (एओएम), ब्रोंकाइटिस, र ग्रसनीशोथ जस्ता संक्रमणहरूको उपचार गर्न सक्छ। यो मौखिक क्याप्सूल र तरल निलम्बनको रूपमा उपलब्ध छ जुन खुराकको आधारमा दैनिक एक वा दुई पटक प्रशासित गर्न सकिन्छ।
Cefdinir मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
सेफडिनिर मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
अमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन-प्रकारको एन्टिबायोटिक हो जुन यसको संरचनासँग नजिकबाट सम्बन्धित छ पेनिसिलिन ; जे होस्, पेनिसिलिनको विपरित, अमोक्सिसिलिनले अधिक ब्याक्टेरियाहरूमा ढाक्छ। अमोक्सिसिलिन अक्सर क्ल्यावुलनिक एसिडको साथ जोडीन्छ, एक बीटा-ल्याक्टमेज अवरोधकर्ता, जसले यो निश्चित ब्याक्टेरियाको बिरूद्ध बलियो एन्टिबायोटिक बनाउँछ।
अमोक्सिसिलिन (अमोक्सिसिलिन के हो?) उपचार गर्न सक्दछ एच pylori संक्रमण, कम श्वास नलिका संक्रमण, र अन्य संक्रमणहरू बीचमा प्रमेह। यो मौखिक क्याप्सूल, ट्याब्लेट, चेवाबल ट्याब्लेट, र तरल मौखिक निलम्बनको रूपमा उपलब्ध छ। अमोक्सिसिलिन सामान्यतया दिनको दुई वा तीन पटक खुराक र संक्रमणको आधारमा लिईन्छ।
सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एन्टिबायोटिक
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति केवल जेनेरिक ड्रगको रूपमा उपलब्ध (ब्रान्ड नाम बन्द) ब्रान्ड र जेनेरिक संस्करणहरू उपलब्ध छन्
ब्रान्ड नाम के हो? ओम्निसेफ मोक्सैटाग, एमोक्सिल
निलम्बनका लागि मौखिक पाउडर मौखिक क्याप्सूल
मानक खुराक के हो? 300 मिलीग्राम प्रत्येक 12 घण्टा वा 600 मिलीग्राम दैनिक एक पटक
Dosing संक्रमण उपचार मा निर्भर गर्दछ Mg०० मिलीग्राम प्रत्येक १२ घण्टा वा २ 8० मिलीग्राम प्रत्येक hours घण्टामा
Dosing संक्रमण उपचार मा निर्भर गर्दछ
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? –-१० दिन
अवधि संक्रमण उपचारमा निर्भर गर्दछ –-१० दिन
अवधि संक्रमण उपचारमा निर्भर गर्दछ
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क, बच्चाहरू, र शिशुहरू months महिना र सो भन्दा बढि वयस्क, बच्चाहरू, र शिशुहरू3महिना र सो भन्दा बढि
अमोक्सिसिलिनमा उत्तम मूल्य चाहनुहुन्छ?
सर्फडिनिर र एमोक्सिसिलिन द्वारा उपचारित अवस्था
सेफडिनिर एफटीए-अनुमोदित छ तीव्र ओटिटिस मिडिया, वा मध्य कान संक्रमण, साथै छाला र नरम ऊतक संक्रमणहरूको उपचार गर्न। सेफडिनिरलाई माथिल्लो र तल्लो श्वसन पथको संक्रमणहरूको उपचारको लागि पनि अनुमोदन गरिएको छ। माथिल्लो श्वास नलीको संक्रमणमा साइनोसिटिस, ग्रसनीशोथ, र टोन्सिलिटिस समावेश छ। तल्लो श्वास नलीको संक्रमणमा समुदायद्वारा प्राप्त न्यूमोनिया समावेश छ, जसले सेफडिनिरले १ adults बर्ष र माथिका वयस्कहरू र बच्चाहरूमा उपचार गर्न सक्छ।
अमोक्सिसिलिन कान, नाक, र घाँटी संक्रमण जस्तै साइनोसिटिस, ग्रसनीशोथ, र टोन्सिलिटिस को उपचार गर्न अनुमोदित छ। अमोक्सिसिलिन कम श्वासप्रणाली को संक्रमण को उपचार को लागी पनि अनुमोदित छ जस्तै समुदाय द्वारा अधिग्रहित निमोनिया द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया । सेफडिनिर विपरीत, अमोक्सिसिलिन पनि सामान्यतया प्रमेह र उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ एच pylori संक्रमण ।
सर्त सेफडिनिर अमोक्सिसिलिन
तीव्र ओटिटिस मिडिया हो हो
जीर्ण ब्रोन्काइटिस हो हो
साइनसाइटिस हो हो
ग्रसनीशोथ / टन्सिलिटिस हो हो
समुदाय-अधिग्रहित निमोनिया हो हो
छाला र नरम ऊतक संक्रमण हो हो
गोनोरिया हैन हो
के सेफडिनिर वा एमोक्सिसिलिन बढी प्रभावकारी छ?
सेफडिनिर ग्राम-ब्याक्टेरिया सहितको संक्रमणको बिरूद्ध प्रभावकारी छ स्टेफिलोकोकस अउरियस , स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया (पेनिसिलिन-अति संवेदनशील तनावहरू मात्र), र स्ट्रेप्टोकोकस प्योजेनेस । सेफडिनिर पनि ग्राम नकारात्मक ब्याक्टेरियाहरू विरूद्ध प्रभावकारी छ हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा , हेमोफिलस प्याराइनफ्लुएन्जे , र मोराक्सेला क्याटेरहलिस ।
अमोक्सिसिलिन स्ट्रेप्टोकोकस र स्टेफिलोकोकस प्रजाति जस्ता ग्राम-पॉजिटिव ब्याक्टेरियाहरूले गर्दा हुने संक्रमणको विरूद्ध प्रभावकारी छ। अमोक्सिसिलिन पनि ग्राम नकारात्मक ब्याक्टेरियाहरू बिरूद्ध सक्रिय छ हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा , Escherichia कोलाई , हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी , र Neisseria gonorrhoeae ।
त्यहाँ धेरै कडा अध्ययनहरू छैनन् जुन सेभेडिनिर र एमोक्सिसिलिनको प्रत्यक्ष तुलना देखाउन गरिएको छ। जे होस्, केहि मल्टिसेन्टर क्लिनिकल परीक्षणहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपमा सेभेडिनिर र एमोक्सिसिलिन / क्लावुलानेट प्रभावकारितामा समान छन् भनेर देखायो। ब्याक्टेरिया साइनोसिटिसको उपचार गर्दा सेफडिनिर १० दिन पछि अमोक्सिसिलिन / क्लावुलानेट जस्तै प्रभावकारी थियो।
अर्कोमा अध्ययन , सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन / क्लावुलानेट तरल निलम्बन सहनशीलता को बाल रोगीहरूमा तुलना गरिएको थियो। To१ young साना बच्चाहरूको चार देखि आठ बर्ष उमेरको नमूनामा, तिनीहरूमध्ये 85 85% ले सेफडिनिरको स्वाद राम्रो वा वास्तवमा राम्रोको रूपमा मूल्या rated्कन गरे उनीहरूको 63 63% को तुलनामा जसले अमोक्सिसिलिन / क्लावुलानेट, सेफप्रोजिल, र अझिथ्रोमाइसिनलाई समान दर्जा दिएका छन्।
यी एन्टिबायोटिकको प्रभावकारिता कुन ब्याक्टेरियामा संक्रमण हुँदैछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। कुन एन्टिबायोटिक तपाईंको लागि उत्तम काम गर्दछ भनेर तपाइँको डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्। बढेको कारण एन्टिबायोटिक प्रतिरोध , यो महत्त्वपूर्ण छ कि एन्टिबायोटिक मात्र संक्रमण संवेदनशील ब्याक्टेरिया निर्धारित गरे पछि मात्र प्रयोग गरिन्छ।
कभरेज र सेफडिनिर बनाम अमोक्सिसिलिनको लागत तुलना
जेनेरिक एन्टिबायोटिकको रूपमा, सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन व्यापक रूपमा उपलब्ध छन्। लगभग सबै मेडिकेयर पार्ट डी र बीमा योजनाहरूले सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन ढाक्छ। जेनेरिक सेफडिनिरको १०० भन्दा बढीको सामान्य खुदरा लागत। एकलकेयर कूपनको साथ, यो लागत mg०० मिलीग्राम क्याप्सूलको १०-दिन आपूर्तिको लागि $ २ than भन्दा कममा कम गर्न सकिन्छ।
अमोक्सिसिलिन जेनेरिक र ब्रान्ड-नाम संस्करणहरूमा उपलब्ध छन्। जेनेरिक अमोक्सिसिलिन क्याप्सुलको औसत लागत लगभग $ २ is हो। एकलकेयर डिस्काउंट कार्ड प्रयोग गर्नाले lower०० मिलीग्राम क्याप्सूलको १०-दिन आपूर्तिको लागि around $ सम्म कम गर्न सकिन्छ।
मानक खुराक 300 मिलीग्राम ट्याब्लेट (२० को मात्रा) Mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेट (२० को मात्रा)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 0– $ 49 $ 0– $ 10
एकलकेयर लागत $ 24- $ 63 + + +
सेफडिनिर बनाम अमोक्सिसिलिनको साझा साइड इफेक्टहरू
सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिनसँग सम्बन्धित सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू पखाला, मतली, र बान्ता हो।
एमोक्सिसिलिनले क्लेरिथ्रोमाइसिन र लान्सोप्रजोलको साथ लिएपछि टाउको दुख्ने बढी सम्भावना हुन्छ एच pylori संक्रमण। अमोक्सिसिलिनमा यसलाई पनी पछि रेशको उच्च घटना हुन सक्छ।
सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिनको अधिक गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा एलर्जी वा अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरू समावेश छन्। यदि तपाईं प्रतिकूल घटनाहरू जस्तै सास फेर्ने समस्या वा गम्भीर दागको अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तुरून्त चिकित्सकको सहायता लिनुहोस्।
पखाला हो पन्ध्र% हो > १%
मतली हो %% हो > १%
बान्ता हो ०.7% हो > १%
टाउको दुखाई हो दुई% हो %%
पुराना हो ०.9% हो > १%
स्रोत: डेलीमेड ( सेफडिनिर ), डेलीमेड ( अमोक्सिसिलिन )
सेफडिनिर बनाम अमोक्सिसिलिनको ड्रग अन्तर्क्रिया
सेफडिनिरले एन्ट्यासीडहरू साथ साथै फलामको पूरकहरूको पनि अन्तर्क्रिया गर्दछ। एन्ट्यासिडहरू र फलामका पूरकहरूले सेफडिनिरको शोषण कम गर्न र यसको प्रभावकारिता कम गर्न सक्दछन्। सेफडिनिर कम्तिमा पनि दुई घण्टा लिनुपर्दछ पहिले वा पनी यी अन्य औषधिहरू प्रशासित पछि।
दुबै सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन प्रोफेनेसिड र एलोपुरिनोल जस्तो एन्टि-गाउट औषधिसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्। एन्टि-गाउट एजेन्टहरूले सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिनको रगतको मात्रा बढाउन सक्छ, जसले बढि साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ।
सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन लामो कारणहरूको रूपमा परिचित छन् प्रोच्रोम्बिन समय जो warfarin लिइरहेका छन्। यो औषधीको अन्तरक्रियाले रक्तस्रावको बढेको जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
एन्टिबायोटिकहरू मौखिक गर्भनिरोधकहरूको प्रभावकारिता कम गर्न परिचित छ। गर्भावस्थाको जोखिम कम गर्न वैकल्पिक जन्म नियन्त्रण विधिहरू आवश्यक पर्दछ।
औषधि ड्रग क्लास सेफडिनिर अमोक्सिसिलिन
म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड एन्ट्यासिडहरू हो हैन
फेरस फ्युमरेट फलामका पूरक हो हैन
एलोपुरिनोल एन्टिगट हो हो
Norethindrone मौखिक गर्भ निरोधक हो हो
सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिनको चेतावनी
यदि तपाईंसँग छ भने सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिनबाट बच्न सकिन्छ पेनिसिलिन एलर्जी । किनकि यी औषधीहरू रासायनिक रूपमा पेनिसिलिनसँग मिल्दोजुल्दो छन्, यदि तिनीहरूसँग पेनिसिलिनको स्थापना भएको एलर्जी छ भने तिनीहरूले गम्भीर एलर्जीको कारण लिन सक्दछन्।
डाईरिया एन्टिबायोटिक्सको सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन जस्ता सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरूमध्ये एक हो। यी एन्टिबायोटिकले पनि अधिक गम्भीर प्रकारको पखाला हुने खतरा बढाउन सक्छ क्लोस्ट्रिडियम मुश्किल । यदि तपाईंसँग एक चिकित्सा ईतिहास छ सी फरक संक्रमण, यी एन्टिबायोटिक को प्रयोग अनुगमित वा बन्द गर्न आवश्यक पर्दछ।
यी एन्टिबायोटिकहरू केवल ब्याक्टेरियाहरूले गर्दा हुने संक्रमणहरूको लागि मात्र सिफारिस गर्नुपर्दछ। तिनीहरू जस्तै भाइरल संक्रमणको विरुद्धमा प्रभावकारी छैनन् COVID-19 । सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ जब तिनीहरू संवेदनशील ब्याक्टेरियालाई लक्षित गर्दछन्। यदि ती अनुपयुक्त रूपमा प्रयोग गरियो भने ब्याक्टेरियाहरूले एन्टिबायोटिक प्रतिरोध लिन सक्छ र अधिक गम्भीर संक्रमण निम्त्याउन सक्छ।
सेफडिनिर बनाम अमोक्सिसिलिनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
सेफडिनिर भनेको के हो?
सेफडिनिर तेस्रो-पुस्ताको सेफलोस्पोरिन हो जुन तीव्र ओटिटिस मिडिया र फरेन्जाइटिस जस्ता ब्याक्टेरिया संक्रमणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो निश्चित छाला संक्रमण र कम श्वासप्रश्वासको पथ संक्रमणहरूको उपचार गर्न एफडीए-अनुमोदित पनि छ। सेफडिनिर पनि यसको ब्रान्ड नाम ओम्निसेफ द्वारा चिनिन्छ।
अमोक्सिसिलिन भनेको के हो?
अमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन-प्रकारको एन्टिबायोटिक हो जुन कान, नाक र घाँटीका विभिन्न ब्याक्टेरिया संक्रमणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले कम श्वासप्रणालीको संक्रमणहरूको पनि उपचार गर्न सक्छ, एच pylori संक्रमण, र प्रमेह। अमोक्सिसिलिन अक्सर क्ल्याभुलनेट, वा क्लावुलनिक एसिडको साथ मिलिन्छ, ब्रान्डको नाम अग्मेन्टिन अन्तर्गत।
के सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन एकै हो?
सेफडिनिर र एमोक्सिसिलिन समान छैन। यद्यपि तिनीहरू दुबै एन्टिबायोटिक समूहको छाता समूहका भाग हुन् बिटा-ल्याक्टमहरू, उनीहरू कसरी प्रयोग गर्छन् र कसरी गरिन्छ भन्नेमा तिनीहरूको भिन्न भिन्नताहरू छन्।
के सेफडिनिर वा एमोक्सिसिलिन राम्रो छ?
अधिक प्रभावकारी एन्टिबायोटिक एक हो जुन संक्रमणको कारण ब्याक्टेरियाको तनाव बिरूद्ध सब भन्दा राम्रो काम गर्दछ। उदाहरण को लागी, amoxicillin को लागी राम्रो हो एच pylori संक्रमण। जहाँसम्म, केहि व्यक्तिले सेफडिनिर रु एक पटक दैनिक विकल्प अन्य संक्रमणहरूको लागि।
के म गर्भवती हुँदा सेफडिनिर वा अमोक्सिसिलिन प्रयोग गर्न सक्छु?
त्यहाँ सेफडिनिर वा एमोक्सिसिलिन गर्भवती हुँदा सुरक्षित छन् भनेर देखाउन पर्याप्त नैदानिक ​​अध्ययन गरिएको छैन। ती दुबै मानिन्छ गर्भावस्था कोटि बी ड्रगिहरु हो, जुन जन्म दोषहरु को लागी कम जोखिम को संकेत गर्दछ। अझै, तिनीहरू आवश्यक भएमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। गर्भावस्थाको दौरान उत्तम विकल्पमा चिकित्सा सल्लाहका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म मदिराको साथ सेफडिनिर वा अमोक्सिसिलिन प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सीले सेफडिनिर वा अमोक्सिसिलिनसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैन। जे होस्, सामान्यतया एन्टिबायोटिकको साथ रक्सी पिउनु हुँदैन। अत्यधिक मात्रामा रक्सीको सेवनले प्रतिकूल साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ जस्तै मतली र बान्ता। रक्सी पनि गर्न सक्छ प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर र शरीरको संक्रमणको विरूद्ध लड्न यसलाई गाह्रो बनाउनुहोस्।
कालो बक्स चेतावनी के हो?
इरेक्टाइल डिसफंक्शनका लागि प्राकृतिक उपचार र उपचारहरूको लागि एक गाईड
धेरै धेरै गमी भालु खाने को साइड इफेक्ट
के हुन्छ यदि पोटेशियम धेरै कम छ
घाँटी दुख्ने र कान दुख्ने को लागी प्राकृतिक उपचार
काउन्टर खोकी औषधि मा सबैभन्दा प्रभावकारी